Salvadaoreanina anarivony miaritra COVID-19 tsy manan-drano isasana tanana · Global Voices teny Malagasy
Namela dian-tanana ny taona maro nanjakan'ny kolikoly sy fitantanan-dratsy
Voadika ny 15 Septambra 2020 5:07 GMT
Vakio amin'ny teny Italiano, Español, عربي, Português, Igbo, Français, Dansk, English
Pika avy amin'ny video avy amin'ny fantsom-baovao EFE ao amin'ny Twitter, 19 Aogositra 2020.
Iray amin'ny zavatra ilaina indrindra amin'ny fisorohana ny COVID-19 ny fanasana tanana matetika, saingy, an'hetsiny ny Salvadaoreanina miatrika COVID-19 tsy mahazo rano mandeha madio azo antoka. Araka ny Firenena Mikambana, mihoatra ny 600.000 ny isan'ny olona tsy mahazo izay karazan-drano fisotro sy servisy fahadiovana tamin'ny taona 2016 ary mihoatra ny iray tapitrisa ny olona mahazo tolotra rano tsy araka ny tokony ho izy. Araka ny tati-baovao, mety ho niharatsy kokoa io to-javatra io noho ny areti-mandringana.
Rosa Amelia Mendoza, 45 taona manan-janaka telo monina ao Colonia Altavista, monisipalite iray tokony ho 15 kilaometatra avy eo afovoan-tanànan'i San Salvador, dia tsy mbola nahazo rano mandeha tonga tao an-tranony izany hatramin'ny nanombohan'ny areti-mandringana tamin'ny marsa 2020. Ny marina, efa nihoatra ny roa taona izao no tsy mbola ampy araka ny tokony ho izy ny rano avy vava paompy. Tamin'ny antso nifanaovana tamin'ny Global Voices izy no niteny:
“Matahotra ny ho an'ny fianakaviako aho, miteny aminao daholo izao olona rehetra izao mba hanasanao tanana matetika, mba hahazoana antoka fotsiny fa tsy nahatratra anao ny viriosy. Saingy ahoana moa ny hanaovanao izany raha tsy misy rano hanaovana izany? Tsy misy renirano na vovo akaiky mba hakanao rano, ary tsy manam-pahafahana izahay handoavana rano avy amin'ny kamiao mandavataona. Tsy miasa aho amin'izao fotoana izao.”
Misy itovitovizana amin'ireo fiarahamonina an'arivony ao an-drenivohitra San Salvador sy ny manodidina azy ny tantaran'i Mendoza. Sasany amin'ireo tena iharan'izany indrindra ny tanandehibe tahaka an'i Ilopango, Mejicanos, Soyapango, Ciudad Delgado, Altavista, ary ny faritra sasany amin'i San Salvador, izay onenan'ny sarangan'ny mpiasa. Araka ny Masiovohom-baovao EFE, ahitana ny taha fifindrana faharoa ambony indrindra amin'ny COVID-19 ao amin'ny firenena ihany koa ny iray amin'ireo vondrom-piarahamonina ireo, dia ny ao Soyapango.
Tsy vao olana vaovao izany tsy manan-drano mandeha ao an-trano izany, fa manampy trotraka ny toe-draharaha kokoa ny COVID-19 rehefa iankinan'ny ain-dehibe amin'ny fandraisana fepetra fahadiovana anoherana ny viriosy ny rano. Tamin'ny alalan'ny lahatsoratra no nilazan'ny mpanoratra ho an-gazety Santiago Leiva tamin'ny Global Voices:
“Zavatra harafesenina tahaka ny fantsona mitondra azy tsindraindray ihany ny rano. Tena lalina dia lalina tokoa ny olan'ny rano ka na dia nisy aza ny hetsika fidinana an-dalambe tany aloha tany, dia tsy nisy mihitsy ny akon'ny ahiahy avy amin'ireo governemanta teo aloha. Mbola tsy mahavita mahasahana ny mponina salvadaoreanina iray manontolo ny rano.”
Inona ny niavian'ny olan'ny rano Salvadaoreanina?
Tsy ekena ho zon'olombelona ankatoavina ny fahazoan-drano ao El Salvador, ary ahiana ho tratran'ny tsi-fisian-drano ny firenena. Na dia antony roa mahatonga ny tsi-fisian-drano ao El Salvador aza ny tsy fisian'ny fandrindrana ny rano sy ny fikorontanan'ny toetrandro, any amin'ny faritra an-tanandehibe, ny olana tena manery indrindra dia mifandraika amin'ny tsy fahampian'ny sampandraharaham-panjakana. Ireo vondrom-piarahamonina iharany voatonona etsy ambony ireo dia itsinjarana rano avy amin'ny toby fanodinan-drano Las Pavas, toby fanadiovan-drano efa antitra efa tokony tsy ho ampiasaina intsony na nohavaozina ho amin'ny tsaratsara kokoa taona vitsivitsy lasa izany raha efa neken'ny Antenimiera mpanao lalàna ny vatsy tamin'ny taona 2012, taona 2016 ary taona 2018. Tsy nety vita hatramin'ny farany mihitsy ny asa.
Las Pavas no toby tokana mitondra ny rano ho an'ny faritra metropolitana goavan'i San Salvador. Saingy, amin'izao fotoana, tsy mahavokatra rano madio ampy ho an'ny mponina mihoatra ny iray tapitrisa miankina aminy izy io. Raha montsana izy mandritra ny areti-mandringana, tahaka izay nitranga tamin'ny Janoary 2020, dia ho zava-doza indrindra.
Efa niahoaho hatramin'ny antenantenan'ny taompolo-1990 ny sahoan-dresaka sy trangan-kolikoly tao amin'ireo sampana tompon'andraikitra tamin'ny servisin-drano (Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados, na ANDA). Carlos Perla, filohan'ny ANDA nanomboka ny taona 1994 ka hatramin'ny taona 2002, ohatra, niafara tamin'ny figadrana am-ponja maharitra 15 taona noho ny kolikoly. Vao haingana, Frederick Benites, filohan'ny ANDA nandritra ny fitondran'i Nayib Bukele, nampahafantatra tamin'ny Lehiben'ny Fampanoavana ao El Salvador amin'ireo trangam-pitantanana tsy araka ny tokony ho izy ny vatsim-panjakana mitentina an-tapitrisa dôlara maro.
Ratsy fitantanana nihoatra ny 15 taona ny ozinina, hany ka manana fatiantoka 33 tapitrisa dôlara isa-taona izahay.
Nanambara ny fitondran'i Nayib Bukele fa tsy mbola nahazo fikojakojana na fanavaozana araka ny tokony ho izy ny tobin-drano Las Pavas hatramin'ny naha-filoha an'i Francisco Flores tamin'ny taona 1999 ka hatramin'ny taona 2004. Nampiseho sary maromaro ny Filoha Bukele ary nanazava ny fomba nahatonga an'i Las Pavas ho amin'ny misy azy amin'izao fotoana noho ny tsi-firaharahiana sy ny kolikoly tao anatin'ny 30 taona farany.
Amin'ny fijerena ny sary fotsiny, niteny azy ireo aho, “Ahoana ny nahatonga izao? Azonareo sary an-tsaina ve ny fandravana ara-pahasalamana aterak'izao amin'ny vahoakantsika? Izany no mahatonga ny fahavoazana eo amin'ny voa maro dia maro, izany no mahatonga ny aretim-bavony maro dia maro.”
Rano an-tavoahangy ho vonjy voina
Ao anatin'ny fohy ezaka, mizara rano an-tavoahangy ho an'ireo vondrom-piarahamonina tsy manan-drano, miaraka amin'ny rano entin'ny kamiao ny fanjakana, amin'ny alalan'ny ANDA. Manam-pikasana ihany koa ny governemanta ny handavaka vovo (fatsakana) vaovao mba hanomezan-drano sy hampitsaharana ny fiankinana amin'ny tobim-panadiovan-dranon'i Las Pavas. Araka ny tranonkala ofisialy, efa manavao an'i Las Pavas ihany koa amin'ny fitaovana vaovao ny ANDA. Ao anatin'ny “Laminasan-dRanom-Pirenena” vaovao an'ny governemanta izany. Nisioka ny ANDA tamin'ny 18 aogositra:
Isa-potoana ny rano amin'ny fantsona sy ny rano amin'ny tavoahangy avy amin'ny departemanta manohy manome rano azo sotroina amin'ny mpanjifan'i Sierra Morena 2.
Androany izahay namoaka rano an-tavoahangy miisa 25.000.
Hotohizanay ny fanohanana ireo faritra tsy mahazo rano araka ny tokony ho izy
Na izany aza, mitaraina amin'ny tsy fahampian'ny servisy ny mponina avy ao Colonia Altavista. Iray amin'ny olompirenena tsy afa-po i Mendoza, izay nahazo rano amin'ny tavoahangy. Nilaza izy:
Angamba indray isam-bolana no tonga ny kamiao mitondra rano, izay tsy ho ampy hiavotan-tena mandritra ny volana iray manontolo. Tena tsy afa-po mihitsy aho sady tezitra ka mihevitra ny handao an'i El Salvador raha vao tapitra ity areti-mandrindrana ity. Ny antony tokana tsy mbola nandehanako tany Etazonia dia mbola kely ny zanako.
Tamin'ny Janoary ny Filoha Bukele nanolo-kevitra ny hanokatra indray ny adi-hevitra 14 taona amin'ny hampidirana ny rano ho zon'olombelona sy hihazonana ny fitantanana azy ho eo ampelatanan'ny sampandraharaham-panjakana, avy amin'izany dia mametra ny fanomezana azy amin'ny tsy miankina. Tamin'ny 7 sy 8 Septambra, nanomboka nandinika ny tolo-dalàna ny vaomiera tarihan'ny avy ao amin'ny fanoherana ao amin'ny antenimiera mpanao lalàna — angamba rahatrizay hahazo rano mandeha hosotroina sy hisasa tanana ihany ny Salvadaoreanina an'arivony.
Fifindràmonina 07 Mey 2021